सावधान ! यी चार अवस्थामा भुलेर पनि नखानुहोस् सोयाबीन -
सावधान ! यी चार अवस्थामा भुलेर पनि नखानुहोस् सोयाबीन
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १५:०० 359 पटक हेरिएको
सोयाबिन स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । सोयाबिनमा ३३ प्रतिशत प्रोटीन, २१ प्रतिशत कार्बोहाइडेंट, १२ प्रतिशत नमी रहेको हुन्छ । यसमा कोलेस्टेरोल भने हुदैन । यसलाई फ्याट र आइरनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । सोयाबिन स्वास्थ्यको लागि राम्रो भएता पनि कतिपय अवस्थाको लागि यो हानिकारक छ।
जानौ कस्तो अवस्थाको लागि यो हानिकारक रहेको हुन्छ ।
१) गर्भवती अवस्थामा सोयाबीन खाँदा आमा र शिशुका लागि हानिकारक हुन्छ । गर्भावस्थामा वा शिशुलाई दूध चुसाउँदा सोयाबीन वा त्यसको दूध सेवन गर्दा बान्ता आउने र चक्कर लाग्ने समस्या हुन सक्छ । शिशुलाई पनि उल्टी हुन सक्छ ।
२) गाईको दूधबाट एलर्जी हुने मानिसले सोयाबीनको दूध पनि पिउनु हुँदैन । यसको सेवन गर्दा एलर्जी बढ्छ । त्यस्तै माइग्रेन र हाइपोथाइराइडका रोगीहरूले पनि यसको सेवन गर्नु हुँदैन ।
३) मधुमेहका रोगीहरूले पनि सोयाबीन खानु हुँदैन । यो खाँदा शरीरमा चिनीको मात्रा घट्नुको साटो अझै बढ्छ ।
४) सोयाबीनमा हुने फाइटोएस्ट्रेजोन नामक रसायन मिर्गौलारोगीका लागि खतरनाक हुन्छ । रक्त कोशिकाहरूमा यो रसायनको मात्रा बढी हुँदा मिर्गौला बिग्रन्छ।